Hay'adda Culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir ay ku qabteen Magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen amaanka dalka, khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka ah iyo dowlad Goboleedyada.
Sheekh Nuur Baaruud oo ka mid ah hay’adda ayaa sheegay in dowladda ay guulo muhiim ah ka gaartay siyaasadda arrimaha dibadda, la dagaallanka musuqa iyo dhismaha heykalka dowladnimo.
Mar uu ka hadlayay arrinta amaanka ayuu dowladda ku dhaliilay in aysan waxbadan ka qaban amaanka,waxaana uu su’aal ka keenay sida saddex gaari oo wada walxaha qarxa ay ku soo galeen Muqdisho kuna weerareen Hotelka Saxafi.
Waxaa uu dhaliilay isbeddellada ciidamada, xilka qaadista Taliyayaasha Ciidamada iyo sida ay dowladda ku ogaan weysay qaraxyada ka dhaca Muqdisho.
Dowladda Federaalka ah ayuu sheegay in lagula xisaabtamayo dhibaatada haysata shacabka isaga oo xusay in aysan cudur daar u heleyn in maalin kasta shacabka Soomaaliyeed la laayo.
Sheekh Nuur Baaruud ayaa soo jeediyay in Al-shabaab laga saaro labada Shabeelle si amaanka Muqdisho loo sugo,waxaana uu sheegay in ay dowladda Cambaareyn ku muteysan karto in aysan Gobolladaas ka saarin Al-shabaab.
Sheekh Nuur Baaruud ayaa ku baaqay in Xaasaska iyo Carruurta Xubnaha ka tirsan Al-shabaab laga saaro Magaalada Muqdisho sida ay sameeyeen Magaalooyinka Kismaayo iyo Beledxaawo.
Khilaadka dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada ayuu sheegay in dhibaatadaba ka dhalatay markii Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada loo bixiyay madaxweyne islamarkaana ay isu maleeyeen in ay isku awoodyihiin dowladda dhexe.